SomaliaReport: Saacadda Miinada oo Ku Qarxi Rabta Azania
Koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa soo wajahaya dhibaatooyin hor leh maadaama ay quwado siyaasado iska soo hor jeeda wata ku loolamayaan siday cid walba gacanta ugu dhigi lahayd shacabka deegaanka iyo siyaasadda gobolka cusub ee Azaniya. Arintaas ayaad mooddaa inay keeni doonto iska horimaadyo waaweyn. Khuburada u dhuunduleela arimaha geeska Afrika ayaa aaminsan in maxsuulka ka dhasha arintaasi uu waji cusub ku keeni karto dagaalada aan dhamaadka lahayn iyo qaabaynta hanaanka siyaasadeed ee waddanka.
Dad madax banaan oo isugu jira xog ogaal iyo kuwa lafagura siyaasadaha ayaa sheegay in samayska gobolka Azania uu saaxada ku soo kordhin doono kala qaybsan isla markaana abuuri doono khilaaf dhaawac aan laga soo kaban u gaysan doono nabaddii lagu soo dabaali lahaa gobolka. “ riyada ay dadka deegaanku lahaayeen waxay ahayd in lagu tallaabsado samaynta nidaam maamuleed oo ka hirgala gobolka isla markaana si loo wada siman yahay ay beelaha wada dega ugu midoobi lahaayeen horumarinta siyaasadda iyo arimaha dhaqaale ee gobolka sidoo kalena fursadaha ka jira gobolka si loo siman yahay loou faa’iideeyo dadka gobolka ku wada nool, nasiib daro qaab dhismeedka hadda loo sameeyey Azaniya ma aha mid noo cuntami karta isla markaana qancin karta dadka deegaanka ilaa talada qayb na laga siiyo.” Maxamed Cabdi oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sidaa idhi.
Waxaa isa soo taraya dareen muujinaya in dadka deegaanku ay aad u dhaliilsan yihiin mamaulka Azania, waxayna aaminsan yihiin inay ururo ajaanib ahi maleegayaan qorshe ah inuu gobolku iska ahaado meel ay waddamada dariska ahi ku fushanayaan hirgalinta ujeeddooyinkooda khaaska ah sida danaooda siyaasadeed iyo midka amni.
Jawiga guud ee ka beermay siyaasadda Azaniya ayaa maraya meel xasaasi ah una baahan in si taxaddar leh loo eego. mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka faaloonaya marxaladda ayaa yidhi “ haddii si macquul ah arimaha loo eego, nidaamkan wax lagu dhisay faa’iido uma laha gobolkan iyo guud ahaan Soomaaliyada kale, loolankan xukun raadinta ahi wuxuu umaddan burburka dunida ugu xumi soo gaadhay ku soo kordhin doonaa uun dhiig badan oo data”.
Haddii ifafaalooyinka muuqda wax lagu qiimaynayo, gobolkan waligii kama dhalan karto nabad waarta ilaa hoggaan iyo maamul ay beelaha wada dega u wada dhan yihiin la sameeyo.
Dadka deegaanka ayaa cabashooyin ka muujiyey faragalinta gobolkan kaga imanaysa dawladda Kenya inay dhaawacayso amaanka gobolkan isla markaana ujeeddadeda ah inay ka dhigato xayndaab iyada u xidhan uu saamayn xajmi wayn ku keeni doono dadka ay abaaraha ba’ani haystaan.
Aragtida kale ee jirta ayaa ah in dhismaha Azania uusan wali dhamaan sidaa darteed Aqlabiyadda shacabka gobolka ayaa taageersan fikirka Azania balse dhaliilsan qaab dhismeedka hadda jira oo sida ay dadkaasi qabaan ah mid dano shisheeye u adeega.
Axmed Maxamed oo ah dadka deegaanka ayaa yidhi “ waxaan ku qasbanahay hadda inaan taageerno gobolkan u adeega danaha Kenya. Waxaase muhiim ah inay kuwa ku loolama siyaasadda ay fahmaan in dadka dhulkan iska leh ay yihiin kuwa ku dhashay kuna soo koray dhibaatooyikii deegaankan ka taagnaa.”
Khuburada iyo ku xeel-dheereyaasha aadka ugu dhuun-duleela arimaha qallafsan ee abuura siyaasadaha qabiilka ayaa aaminsan inaan xisaabta lagu darsan doonista iyo afkaarta dadka deegaanka u dhashay.
Maxamed Weheliye oo ah khabiir iyo daraaseeye ka tirsan Al-Shahid Media Network ayaa yidhi “ qorshaha lagu dhisay Azaniya ma ahayn hindise ka yimid dadka gobolka ee waxay ahayd mid shucuurtooda lid ku ah isla markaana khasaariyey dadaalkii ay bulshadu muddo ugu jirtay nabad ku soo dabaalidda gobolkaa”.
Kala qaybsanaan baaxad wayn ayaa hadda ka taagan gobolka khaas ahaan oday-dhaqameedyada iyo bulshada qurbaha ku nool. Ilaa iyo markii magaalada Nairobi looga dhawaaqay inuu professor Gaandhi yahay madaxweynaha Azania ayay sii badatay xiisadda gobolku.
Sitimaanadii u danbeeyey ayaa waxaa dibadda u soo baxay dhinacyo xooggan oo u wada tartamaya booska madaxweynenimo. Deeq Cabdi Madar ayaa magaalada Nairobi isu soo sharaxaya xilkan halka Maxamed Maxamuud Kilaf oo ku nool magaalada London uu isna isu soo taagay booskan.
Agaasimaha idaacadda Nairobi ee codka Soomaaliya mudane Maxamed Xassan ayaa yidhi “ danaha kala jeeda ee is wada hardinaya ee ka jira Azania waxay koonfurta Soomaaliya u keeni doonaan xasilooni daro oo ka dhalan doonta siyaasadda guracan ee wax lagu wado”.
Quwadaha geeska Afrika ka jira ee Kenya iyo Ethiopia ayaa iyagu ku kala fog samayska Azania. Dawladda Kenya ayaa iyadu taageersan hoggaanka Gaandhi halka xukuumadda Ethiopia-na ay wadato Barre Hiiraale oo ahaa hoggaamiye-kooxeedkii isbahaysiga Jubba haddana waxoogaa awood ah ku haysta aagga Gedo.
Dawladda Kenya ayaa isku dayaysa inay ku sugnaato Soomaaliya si ay dhulkeeda uga hor istaagto argagixisada. Weheliye oo arinkaa ka faaloonaya ayaa yidhi “dawladda Kenya iskuma halayn karto kala-qaybsanaanta jirta, waa inayhagaajiso mucaamalaadkeeda siyaasadeed. Waxaa muuqata inay xukuumadda Kibaki ay ku lug go’san tahay qadiyadda Azania”.
Dadka deegaanka oo ka daalay khilaaf ayaa qaba in lagu midoobi karo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka. Xaliimo Muuse oo ka mid ah dadka ku nool deegaanka gedo ayaa tidhi “ waxaan doonaynaa inaan gaadhno nabadda iyo horumarka ay gaadheen ismaamul goboledyada Somaliland iyo Puntland oo kale, laakiin am rabno hoggaan la isku qasbo”.